မြန်မာ Dota2 ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့ Update – Gaming Noodle
The International 2019 (TI9) နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာမှာ လည်း Dota2 ကစားသမား အပြောင်းအရွေ့နဲ့ ကောလဟာလတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသလို မြန်မာမှာလည်း MESL ပြိုင်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ Dota2 ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့လေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အပြောင်းအရွှေ့တွေကို ဖော်ပြရာမှာလည်း မြန်မာရဲ့ ကြီး (၄) ကြီးလို့ဆိုရမယ့် Team Cyanide (ex-RG), Outworld, King Panda Gaming နဲ့ Yangon Galaticos စတဲ့ Tier-1 အသင်းတွေရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကိုသာ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ပြည်တွင်းကစားသမားများနဲ့ ကာယကံရှင်များထံမှ အတက်နိုင်ဆုံး စုဆောင်းရေးသားပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက စာရေးသူ၏ ပေါ့လျှော့မှုသာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
1. Team Cyanide
MESL ကစားနေစဉ်အချိန်ကတည်းက Reckoning Esports(RG) ကနေ ထွက်ခွာလာတဲ့ RapRap ဟာ သူရဲ့ ကစားဖော်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Kenji, ShowTi, Leo နဲ့ Insane တို့နဲ့ ပြန်လည် ပူးပေါင်းပြီ Team Cyanide ကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ MESL ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သလို မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ လက်တွဲအကြာဆုံး လူစာရင်းဟာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားတာကတော့ ကျန်အသင်းတွေအတွက် သတင်းကောင်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ Training Camp ပြန်ဆင်းပြီး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ လေ့ကျင့်ရမှာ ဖြစ်လို့ လက်စွမ်းတိုးတက်မှုတွေကိုပါ မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ Team Cyanide အနေနဲ့ အထိုင်ကျပြီးသား လူစာရင်းကို ပုံမှန်လက်စွမ်းသာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး Dota2 အသင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ဦးမှာပါ။
2. King Panda Gaming (KPG)
BOD Cyber and Joy Cyber Dota2 Tournament Champion “KPG”
MESL Grand Final ရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုအပေါ် ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက် KPG ကတော့ Team Cyanide လိုမဟုတ်ပဲ လူအပြောင်းအလဲ တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
KPG စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Offlaner “Kalay” ဟာ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီး လစ်လပ်နေတဲ့ နေရာအတွက် Kelvin Lay ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Kelvin Lay ကတော့ Rank 300 ကျော်ရှိပြီး အရင် TNT အသင်းရဲ့ Captain/Drafter တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
TNT အသင်းမှာ Position-5 Support Role ဆော့ခဲ့ပေမယ့် KPG မှာတော့ Position-4 Semi-support role ကို ပြောင်းဆော့မှာ ဖြစ်ပြီး Kalay99 က Offlane ပြောင်းဆော့မှာပါ။ MESL ပွဲမှာ KPG ရဲ့ Coach အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Kelvin Lay ဟာ ယခု KPG ရဲ့ Captain/Drafter Role ကိုပါ တွဲဖက် တာဝန်ယူသွားမှာပါ။ ဒီလူစာရင်းက မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြမယ့် တစ်ချက်ကတော့ မကြာခင်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ BOD Cyber & Joy Cyber ရဲ့ Tournament မှာ KPG အသင်းက ပထမဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာတော့ အသင်းကြီး အများစု မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် KPG အတွက် Team Cyanide ရဲ့ သရဖူကို အရယူဖို့ တွန်းအားတစ်ခုတော့ ဖြစ်စေမှာပါ။
MESL Regular Season မှာ ဒုတိယ ရရှိခဲ့ပေမယ့် Main Event မှာ ထင်သလောက် လက်စွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တဲ့ Outworld ကလည်း ကစားသမား ၂ ဦး အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Outworld စဖွဲ့ကတည်းကရော အရင် Eternal အသင်းထဲကပါဝင်ခဲ့တဲ့ Captain/Support “Scorpion” နဲ့ Offlaner “Hy” တို့ ၂ ယောက်ဟာ ပညာရေးကိစ္စများကြောင့် အသင်းကထွက်ခွာသွားလို့ ကစားသမားသစ် ၂ ယောက်နဲ့ ပြန်လည်အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။
Scorpion နေရာအတွက် “Mesmerize” ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီး Hy နေရာအတွက်တော့ “GreeN” ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Mesmerize (အမည်ရင်း Ring Naw) ကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် မျက်နှာသစ် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက် ၂၂ နဲ့ Rank ကတော့ 1400 ကျော်ရှိပြီး Support Role ဆော့မှာပါ။ ယခု Outworld ကတော့ Mesmerize ရဲ့ ပထမဆုံး အသင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ GreeN ကတော့ TNT နဲ့ King Panda Gaming က ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Offlane ကစားသမားကောင်း တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ လက်စွမ်းတွေက Outworld အသင်းရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ဟာကွက်တွေကို ဖြည့်စည်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
4. Yangon Galaticos (YG)
YG Roster at MESL
ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ MESL မှာယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ပဲ Main Event (၄) သင်းအနက် အဆင့်(၄)သာ ရရှိခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ Dota2 အသင်းကို မြေလှန်ခဲ့ပါတယ်။ TNT ကစားသမားဟောင်း ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ Skill Lay နဲ့ LuN (ရန်နိုင်) တို့ ၂ ဦးသာ အသင်းမှာ ဆက်လက်ထားရှိပြီး ယခင် အခြေပြု တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ “Thet Oo” လို ကစားသမားမျိုးသာမက “Arman” နဲ့ “LuffY” တို့နဲ့ပါ လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
အသင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာတော့ မန္တလေးက ကစားသမား ၂ ယောက်ရယ် ရန်ကုန်က ကစားသမား ၁ ယောက်ရယ် ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Mandalay AllStar နဲ့ Central အသင်းက Mid Player “Zaw Rain” နဲ့ Offlaner “Minato” တို့ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၂ ဦးလုံးက Rank 500 နဲ့ 700 ကျော်မှာ အသီးသီး ရပ်တည်နေလို့ လျှော့တွက်လို့မရမယ့် ကစားသမား ၂ ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Carry အနေနဲ့ကတော့ Tier-2 အဆင့် အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ NoX နဲ့ Flash Gaming တို့မှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ “Zipzap” ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိ Carry player ပီပီ Skill Lay နဲ့ LuN တို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာ ပိုမို တိုးတက်လာဦးမှာဖြစ်ပြီး ကစားသမားဟောင်းတွေရဲ့ လက်စွမ်းကို မှီပြီး ကျော်တက်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ (၄) သင်းဟာ လက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ ဆုကြေးငွေ ၃၃ သိန်းကျော်တန် ICT Challenge ပြိုင်ပွဲနဲ့ မြန်မာကိုယ်စားပြုအသင်းရွေးချယ်မယ့် WESG 2019 မှာလည်း ထိပ်ဆုံး ၄ သင်းအဆင့်ကို ရောက်ရှိနေကြပြီး Main Event ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လူစာရင်းကတော့ လက်ရှိ WESG နဲ့ ICT Challenge ကို ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုပြိုင်ပွဲ ၂ ခုပြီးရင်လည်း မကြာခင် စတင်တော့မယ့် Acer Predator League မတိုင်ခင် အပြောင်းအလဲ တွေ ထပ်မံ တွေ့ရှိရဦးမလား? အသင်းပိုင်ရှင်တွေကပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အချိန်ပေးဦးမလားဆိုတာတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင် ခင်ဗျာ။
မွနျမာ Dota2 ကစားသမား အပွောငျးအရှေ့ Update
The International 2019 (TI9) နောကျပိုငျး နိုငျငံတကာမှာ လညျး Dota2 ကစားသမား အပွောငျးအရှနေဲ့ ကောလဟာလတှေ ဆကျတိုကျဖွဈပျေါနသေလို မွနျမာမှာလညျး MESL ပွိုငျပှဲပွီး နောကျပိုငျး ဖွဈပကျြနတေဲ့ Dota2 ကစားသမား အပွောငျးအရှလေ့ေးတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
အပွောငျးအရှတှေ့ကေို ဖျောပွရာမှာလညျး မွနျမာရဲ့ ကွီး (၄) ကွီးလို့ဆိုရမယျ့ Team Cyanide (ex-RG), Outworld, King Panda Gaming နဲ့ Yangon Galaticos စတဲ့ Tier-1 အသငျးတှရေဲ့ အပွောငျးအလဲတှကေိုသာ ဖျောပွသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အောကျပါ အခကျြအလကျတှကေိုလညျး ပွညျတှငျးကစားသမားမြားနဲ့ ကာယကံရှငျမြားထံမှ အတကျနိုငျဆုံး စုဆောငျးရေးသားပေးထားခွငျး ဖွဈပွီး မှားယှငျးမှု တဈစုံတဈရာ ရှိပါက စာရေးသူ၏ ပေါ့လြှော့မှုသာ ဖွဈပါတယျ ခငျဗြာ။
MESL ကစားနစေဉျအခြိနျကတညျးက Reckoning Esports(RG) ကနေ ထှကျခှာလာတဲ့ RapRap ဟာ သူရဲ့ ကစားဖျောဟောငျးတှဖွေဈတဲ့ Kenji, ShowTi, Leo နဲ့ Insane တို့နဲ့ ပွနျလညျ ပူးပေါငျးပွီ Team Cyanide ကို ရောကျရှိသှားပါတယျ။ MESL ခနျြပီယံဖွဈခဲ့သလို မွနျမာ နိုငျငံရဲ့ လကျရှိ လကျတှဲအကွာဆုံး လူစာရငျးဟာ ပွနျလညျပေါငျးစညျးသှားတာကတော့ ကနျြအသငျးတှအေတှကျ သတငျးကောငျး မဟုတျလောကျပါဘူး။
ကိုယျ့မွကေိုယျ့ရမှော Training Camp ပွနျဆငျးပွီး စိတျခမျြးခမျြးသာသာနဲ့ လကေ့ငျြ့ရမှာ ဖွဈလို့ လကျစှမျးတိုးတကျမှုတှကေိုပါ မွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ။ Team Cyanide အနနေဲ့ အထိုငျကပြွီးသား လူစာရငျးကို ပုံမှနျလကျစှမျးသာ ထိနျးသိမျးနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ ဒီနိုငျငံရဲ့ အကောငျးဆုံး Dota2 အသငျးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျဦးမှာပါ။
MESL Grand Final ရဲ့ ရှုံးနိမျ့မှုအပျေါ ပွနျလာနိုငျဖို့အတှကျ KPG ကတော့ Team Cyanide လိုမဟုတျပဲ လူအပွောငျးအလဲ တဈခုပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ KPG စတငျတညျထောငျကတညျးက ပါဝငျခဲ့တဲ့ Offlaner “Kalay” ဟာ အသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပွီး လဈလပျနတေဲ့ နရောအတှကျ Kelvin Lay ကို ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ Kelvin Lay ကတော့ Rank 300 ကြျောရှိပွီး အရငျ TNT အသငျးရဲ့ Captain/Drafter တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
TNT အသငျးမှာ Position-5 Support Role ဆော့ခဲ့ပမေယျ့ KPG မှာတော့ Position-4 Semi-support role ကို ပွောငျးဆော့မှာ ဖွဈပွီး Kalay99 က Offlane ပွောငျးဆော့မှာပါ။ MESL ပှဲမှာ KPG ရဲ့ Coach အဖွဈပါဝငျခဲ့တဲ့ Kelvin Lay ဟာ ယခု KPG ရဲ့ Captain/Drafter Role ကိုပါ တှဲဖကျ တာဝနျယူသှားမှာပါ။ ဒီလူစာရငျးက မှနျကနျတယျဆိုတာ သကျသပွေမယျ့ တဈခကျြကတော့ မကွာခငျက ကငျြးပခဲ့တဲ့ BOD Cyber & Joy Cyber ရဲ့ Tournament မှာ KPG အသငျးက ပထမဆု ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါပွိုငျပှဲမှာတော့ အသငျးကွီး အမြားစု မပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ KPG အတှကျ Team Cyanide ရဲ့ သရဖူကို အရယူဖို့ တှနျးအားတဈခုတော့ ဖွဈစမှောပါ။
MESL Regular Season မှာ ဒုတိယ ရရှိခဲ့ပမေယျ့ Main Event မှာ ထငျသလောကျ လကျစှမျးမပွနိုငျခဲ့တဲ့ Outworld ကလညျး ကစားသမား ၂ ဦး အပွောငျးအလဲ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ Outworld စဖှဲ့ကတညျးကရော အရငျ Eternal အသငျးထဲကပါဝငျခဲ့တဲ့ Captain/Support “Scorpion” နဲ့ Offlaner “Hy” တို့ ၂ ယောကျဟာ ပညာရေးကိစ်စမြားကွောငျ့ အသငျးကထှကျခှာသှားလို့ ကစားသမားသဈ ၂ ယောကျနဲ့ ပွနျလညျအစားထိုးခဲ့ပါတယျ။
Scorpion နရောအတှကျ “Mesmerize” ကိုချေါယူခဲ့ပွီး Hy နရောအတှကျတော့ “GreeN” ကို ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ Mesmerize (အမညျရငျး Ring Naw) ကတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ မကျြနှာသဈ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး အသကျ ၂၂ နဲ့ Rank ကတော့ 1400 ကြျောရှိပွီး Support Role ဆော့မှာပါ။ ယခု Outworld ကတော့ Mesmerize ရဲ့ ပထမဆုံး အသငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ GreeN ကတော့ TNT နဲ့ King Panda Gaming က ကစားသမားဟောငျးတဈဦးဖွဈပွီး Offlane ကစားသမားကောငျး တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ လကျစှမျးတှကေ Outworld အသငျးရဲ့ လိုအပျနတေဲ့ ဟာကှကျတှကေို ဖွညျ့စညျးနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
ပွငျဆငျမှုအားကောငျးကောငျးနဲ့ MESL မှာယှဉျပွိုငျခဲ့ပမေယျ့ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျ မကိုကျပဲ Main Event (၄) သငျးအနကျ အဆငျ့(၄)သာ ရရှိခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ Dota2 အသငျးကို မွလှေနျခဲ့ပါတယျ။ TNT ကစားသမားဟောငျး ၂ ဦးဖွဈတဲ့ Skill Lay နဲ့ LuN (ရနျနိုငျ) တို့ ၂ ဦးသာ အသငျးမှာ ဆကျလကျထားရှိပွီး ယခငျ အခွပွေု တညျဆောကျခဲ့တဲ့ “Thet Oo” လို ကစားသမားမြိုးသာမက “Arman” နဲ့ “LuffY” တို့နဲ့ပါ လမျးခှဲခဲ့ပါတယျ။
အသငျးကို ပွနျလညျတညျဆောကျရာမှာတော့ မန်တလေးက ကစားသမား ၂ ယောကျရယျ ရနျကုနျက ကစားသမား ၁ ယောကျရယျ ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ Mandalay Allstar and Central အသငျးက Mid Player “Zaw Rain” နဲ့ Offlaner “Minato” တို့ကို ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ ၂ ဦးလုံးက Rank 500 နဲ့ 700 ကြျောမှာ အသီးသီး ရပျတညျနလေို့ လြှော့တှကျလို့မရမယျ့ ကစားသမား ၂ ဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ Carry အနနေဲ့ကတော့ Tier-2 အဆငျ့ အသငျးတှဖွေဈတဲ့ NoX နဲ့ Flash Gaming တို့မှာ ကငျြလညျခဲ့ဖူးတဲ့ “Zipzap” ကို ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံရှိ Carry player ပီပီ Skill Lay နဲ့ LuN တို့ရဲ့ ထိနျးခြုပျမှု အောကျမှာ ပိုမို တိုးတကျလာဦးမှာဖွဈပွီး ကစားသမားဟောငျးတှရေဲ့ လကျစှမျးကို မှီပွီး ကြျောတကျနိုငျဖို့အတှကျကတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အထကျပါ (၄) သငျးဟာ လကျရှိ ကငျြးပနတေဲ့ ဆုကွေးငှေ ၃၃ သိနျးကြျောတနျ ICT Challenge ပွိုငျပှဲနဲ့ မွနျမာကိုယျစားပွုအသငျးရှေးခယျြမယျ့ WESG 2019 မှာလညျး ထိပျဆုံး ၄ သငျးအဆငျ့ကို ရောကျရှိနကွေပွီး Main Event ကို ဆကျလကျယှဉျပွိုငျရမှာပါ။ အထကျမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ လူစာရငျးကတော့ လကျရှိ WESG နဲ့ ICT Challenge ကို ယှဉျပွိုငျကွမှာ ဖွဈပွီး ထိုပွိုငျပှဲ ၂ ခုပွီးရငျလညျး မကွာခငျ စတငျတော့မယျ့ Acer Predator League မတိုငျခငျ အပွောငျးအလဲ တှေ ထပျမံ တှရှေိ့ရဦးမလား? အသငျးပိုငျရှငျတှကေပဲ စိတျရှညျရှညျနဲ့ အခြိနျပေးဦးမလားဆိုတာတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရအောငျ ခငျဗြာ။